ဦးမာဃ လို ကျင့်ကြံသူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ဦးမာဃ လို ကျင့်ကြံသူ
ဦးမာဃ လို ကျင့်ကြံသူ
Posted by မောင် ပေ on Sep 13, 2011 in Local Guides, Think Different | 23 comments
ဦးထွန်းမြင့် ဆိုတာ တောင်သာရွာက ယာသမားကြီး ။ အခုတော့ တောင်သာမြို့ နယ် ဆိုလားပဲ ။
တောင်သာ ဆိုတာ မန်းတလေး မြင်းခြံလမ်းပေါ်မှာ ရှိတာပေါ့ ။
ဒီနှစ် ဦးထွန်းမြင့် ရဲ့ ယာက ပဲအထွက်မဆိုးဘူး လို့ ပြောရမယ် ။
ဒါနဲ့မန်းတလေး အထိ ပဲသွားရောင်းရင်း ၊ မန်းတလေး မြို့ ပေါ်ကနေ ၊ ပွဲရုံပိုင်ရှင် ရဲ့ ကောင်းမှု နဲ့ …
နတ်သုဓာ ဆိုတဲ့ အစားအစာ တစ်မျိုး ကို ဦးထွန်းမြင့် တစ်ယောက် ခံတွင်းတွေ့ ခဲ့တယ်။
နတ်သုဓာ ပုံစံ က ထောပတ်ထမင်းလိုလို နဲ့၊ ပဲသီးတွေ ၊ မုံလာဥနီ အတုံးသေးသေးလေးတွေ ၊ စပျစ်သီးခြောက် တွေ ၊ သီဟိုစေ့ တွေ နဲ့ ထောပတ်ဆန် နဲ့ ချက်ထားတာပါ ။
ကရဝေးရွက်ကလေးတွေ လဲ ပါတယ် ၊ အနံ့ လေးက တော်တော်မွှေးတာကလား ။
နတ်သုဓာ တစ်ပွဲ ရယ် ၊ ကြက်ရင်အုံ တစ်ခု ရယ် ၊ ဘာလချောင်ကြော်ရယ် ၊ သရက်သီးဆီစိမ် ရယ် ၊ ချဉ်ဟင်းရည် တစ်ခွက်ရယ် ကို တစ်ထောင်ရှစ်ရာကျပ် ဈေးသင့်ကြောင်း သိခဲ့ရတယ် ။
ဦးထွန်းမြင့် တစ်ယောက် ရွာပြန်ရောက်တဲ့ အထိကို သူ စားခဲ့တဲ့ နတ်သုဓာ ကို ပြန်သတိရနေမိတယ် ။
သူ့ သားလေး ရှင်ပြုပွဲ မှာ ၊ အဲဒီ နတ်သုဓာ ကို သူကျွေးချင်မိတယ် ။
ခက်တာက သူတို့နားနီးတဲ့ မြင်းခြံ တို့ နွားထိုးကြီးတို့ မှာ ၊ ချက်တတ်ပြုတ်တတ်တဲ့သူ ရှိတယ် ထားဦး ၊ သူ့ ရွာထိ လိုက်ချက်ပြုတ်ပေးဖို့ ခေါ်လို့ မရပြန်ဘူး ။
ဦးထွန်းမြင့် တစ်ယောက် ကံကောင်းချင်တော့ သူ့ ရွာကို ပဲလာဝယ်တဲ့ ကုန်သည်ကြီး ဦးဗိုဗို နဲ့ သွားတွေ့ ခွင့်ရတာပါပဲ ။
ဦးထွန်းမြင့် လဲ ပဲအကြောင်းတွေ ပြောရင်းနဲ့သူ့ အလှူမှာ နတ်သုဓာ ကျွေးချင်ကြောင်း ၊ ချက်ပေးမယ့်လူ မလွယ်ကူကြောင်း စကားစပ်မိသွားတယ် ။
ဦးဗိုဗို တစ်ယောက် ၊ ဦးထွန်းမြင့် စကား အဆုံး မှာ ၊ ချက်ချင်းပဲ…မန်းတလေးမြို့ က ကိုဌေးလင်း ဆိုတဲ့ သူတော်ကောင်းတစ်ယောက် ကို သတိရသွားတယ် ။
ဒါနဲ့ ဦးဗိုဗို တစ်ယောက် ၊ ဦးဌေးလင်း ကို ဆက်သွယ်လိုက်တယ် ။
ကိုဌေးလင်း (ခ) ကိုချစ်စိန်
သူ က အိုးသူကြီး
အလှူတွေ မှာ…ဒန်ပေါက် ၊ အုန်းထမင်း ၊ နတ်သုဓာ စသည်ဖြင့် ၊ အလှူရှင် ရဲ့ ဆန္ဒရှိတာကို အခမဲ့ လိုက်လံ လုပ်အားဒါန ပြုသူ တစ်ဦး ။
သူ့ ရဲ့ အချက်အပြုတ် လက်ရာက ပထမ တန်းစား ၊ သူ့ စေတနာ သူ့ လုပ်အား က အမြင့်စား ။
သူ့ ကြေငြာလေး ကို
“ အခမဲ့ ၊ မည်သည့်နေရာမဆို လုပ်အားဒါနလိုက်ပြုပါသည် ။ မိတ်ဆွေ သိပြီးရင် သင့်ရဲ့ မိတ်ဆွေ ကို ပြောလိုက်ပါ ။ အော်ဒါ လက်သင့်ခံသည် ။ ” တဲ့
ဒီလိုနဲ့ အလှူဒကာ ဦးထွန်းမြင့် နဲ့ ကိုဌေးလင်း တို့ ချိတ်ဆက်မိသွားကြပြီး ။
ဦးထွန်းမြင့် ရဲ့ သားရှင်ပြု အလှူပွဲကြီး မှာ နတ်သုဓာ ကျွေးဖြစ်သွားတယ် ။ ကိုဌေးလင်း ရဲ့ လုပ်အားဒါန ၊ အိုးသူကြီးပေါ့ ။
အလှူပွဲလာ ဧည့်ပရိသတ် ၊ ရပ်နီးရပ်ဝေး ဆွေမျိုးများ နဲ့ဘုန်းကြီး များလည်း အလှူ စားဖွယ် ကို သဘောကျ ကုန်တယ် ။
“ စားလို့ ကောင်းလိုက်တာ ၊ တစ်ကယ် အရသာရှိတာပဲ ” စသည်ဖြင့် အားပေးသံများ ကြားရတယ် ။
ကိုဌေးလင်း တစ်ယောက် သူ့ လက်ရာ ကို သုံးဆောင်နေကြသော ဘုန်းကြီးများ ၊ ဧည့်ပရိသတ်များ ကို ကြည့်ရင်း ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်နေပါတယ် ။
အဲဒီမှာ ၊ ကောင်းသော လုပ်ရပ် ၊ ကောင်းမှု ကုသိုလ် များ လုပ်ကိုင်နေသူ ကိုဌေးလင်း ကို ကျွန်တော် တွေ့ ဆုံခဲ့ပြီး သူ့ အကြောင်း ကို အင်တာဗျူး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
ပေ = မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ
ဌေး = ဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာပါ
ပေ = အကိုကြီး နာမည် က
ဌေး = ဌေးလင်း (ခ) ချစ်စိန်ပါ။ မန်းတလေးမြို့၂၉လမ်း နဲ့၃၀ လမ်းကြား ၊ ၈၆ လမ်း ၊ ထုံးဘူးတန်းရပ် မှာ နေပါတယ် ။
၁၉၆၅ တန်ဆောင်မုန်းလ ၁၀ရက်နေ့ က ကျွန်တော့် မွေးနေ့ ပါ ။
မန်းတလေး မှာ မွေးတာ ဖြစ်ပေမယ့် ၊ ကြီးပြင်းလာခဲ့တာ က တော့ ရွှေဘို ကျောက်မြောင်း နားက ရေတော်ရွာ မှာပါ ။
ငယ်စဉ်က ရေငုပ်လုပ်ငန်း ၊ အုတ်သူကြီး လုပ်ခဲ့ဖူးပြီး ယနေ့ လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ကျောက်စိမ်း ဝယ်ရောင်း လုပ်နေပါတယ် ။
ကျွန်တော် ငယ်စဉ် က ၊ ကျွန်တော် ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ ရေတော်ရွာလေး မှာ ဆင်းရဲသူ တွေ ၊ မပြည့်စုံသူတွေ ရဲ့ အခက်အခဲလေး တွေ ကို အမြဲလို တွေ့ မြင်ခဲ့ရပါတယ် ။
အဲဒီကတဲ က ကျွန်တော့် မှာ ပရဟိတ လုပ်ငန်း လုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ် ။
မှတ်မှတ်ရရ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာပေါ့ ဗျာ ။ ရေတော်ရွာလေး မှာ…ဒန်ပေါက် ၁တင်းဖောက်ပြီး စတုဒီသာ အလှူလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒီမှာ..ရွာက ကလေး၊လူကြီး မကျန် အားလုံး ၊ ကျွန်တော့် အလှူကို လာအားပေးကြတာပေါ့ ။
အဲဒါကို လက်တွေ့ ကြည့်ပြီး အရမ်းဝမ်းသာ ပီတိ ဖြစ်ရပါတယ် ။
နောက်ပိုင်းကြတော့ စဉ်းစားမိတာပေါ့နော် ။ နယ်ကတို့ တောရွာကတို့အလှူရှင်တွေ ရှိမယ် ။ ဒန်ပေါက်တို့အုန်းထမင်း တို့ နတ်သုဓာ တို့အစရှိသဖြင့် ကျွေးချင်တဲ့ သူတွေ ပေါ့ ။
မြို့ ပေါ် က လဲ ရှိပါတယ် ။ သူတို့ တွေ အလှူတွေ မှာ ၊ ဒီဟာတွေ ကို ချက်ပြုတ်ပေးဖို့ လူလို မှာပဲ ။
ကျွန်တော့်အနေ နဲ့ ကျွန်တော် တတ်နိုင်တဲ့ ၊ လုပ်အားဒါန လေးပေါ့ဗျာ ။ ပြုချင်လာပါတယ် ။
ဒါနဲ့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်က စပြီး ၊ ကျွန်တော့် ကို ဆက်သွယ်လာတဲ့ အလှူတွေ မှာ လိုက်လံ လုပ်အားဒါနပြု ချက်ပြုတ်ပေးခဲ့တာ ယနေ့ အထိပါပဲ ။
တစ်ချို့ အလှူရှင်တွေ က ဝမ်းသာအားရ ဖြစ်ပြီး ပိုက်ဆံ ချီးမြှင့်လာတာ ရှိပါတယ် ။ အဲဒီအလှူမှာပဲ ကျွန်တော် ပြန်လှူခဲ့တာပါ ။
ညီလေးတွေ့ ရတဲ့ ကြေငြာစာရွက်ကလေး က တော့ အခု မှ လုပ်ထားတာပါ ။
ရွှေဘိုနယ်တစ်ဝိုက် နဲ့ ၊ မိုးကုတ် ၊ ရွှေတော ၊ မြင်းခြံ မြို့ များ က အလှူပွဲတွေ မှာ လိုက်လံချက်ပြုတ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။
ရေတော်ရွာ က ရွှေဘုံသာ ဘုရားမှာလဲ သံမံတလင်း ခင်းလှူခဲ့ပါတယ် ၊ ရေတွင်းလည်း တူးလှူခဲ့ပါတယ် ။
ယနေ့ ကျွန်တော်နေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲ က သာရေးနာရေး မှန်သမျှ မှာလဲ ၊ ကျွန်တော် ပါဝင် ကူညီ လုပ်ကိုင်လျှက်ပါ ။
ကျွန်တော့် အနေ နဲ့မြန်မာတစ်နိုင်ငံ လုံးက ၊ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသ က မဆို ဖိတ်ကြားလာမယ့် အလှူရှင် ရှိမယ် ဆိုရင် အမြဲတမ်း လိုက်လံ လုပ်အားဒါန ပြု ဖို့ အသင့်ပါ ။
ကျွန်တော့် ရဲ့ ကြေငြာ လက်ကမ်းလေး က တော့
“ မိတ်ဆွေ တို့ လှူမယ် ၊ ဆွမ်းကပ် မယ် ၊ ဒါနအတွက် ဒံပေါက် ၊ နတ်သုဓာ ၊ သီးစုံထောပတ်ထမင်း ကျွေးမယ် ဆိုရင်
၂၉ x ၃၀ လမ်းကြား ၊ ၈၆ လမ်း ၊ ထုံးဘူးတန်းရပ် ၊ မန်းတလေး မြို့ က ဌေးလင်း (ခ) ချစ်စိန် ကို သတိရလိုက်ပါ
အခမဲ့ မည်သည့်နေရာမဆို ဒါနလိုက်ပြုပါတယ် ။ မိတ်ဆွေ သိပြီးရင် သင့်ရဲ့ မိတ်ဆွေကို ပြောလိုက်ပါနော် ”
အထက်ပါ အင်တာဗျူးကတော့ ကျွန်တော် မောင်ပေ နဲ့ ကိုဌေးလင်း တို့ ရဲ့ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းထားတာတွေ ပါ ။
“ ကျွန်တော် တို့ ဟာ လူ့ လောက ထဲ ကို ဝင်လာကြပြီး ရင် ဗလာ ပြန်ထွက်သွားမှာလား ၊
နောင်သံသရာ အတွက် အလှူဒါန ၊ ပရဟိတ တွေ လုပ်ပြီး ကုသိုလ်တွေ ယူသွားမလား ” လို့ ကိုဌေးလင်း က ဆိုလာပါတယ် ။
သူ့ ရဲ့ ကောင်းသော လုပ်ရပ် များ ကို သိရှိရပြီး မှာ ၊ ကျွန်တော် မောင်ပေ က ပြန်ပြီး ကြေငြာပေးလိုက်ပါတယ် ။
ကဲ…စာဖတ်သူများ နဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း က အလှူလုပ်လိုသူ ၊ ကိုဌေးလင်း ကို ဆက်သွယ်လို သူများ အနေနဲ့၊ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း
သတင်းကောင်းလေး ပါးလိုက်ပါတယ်နော် ။
ယခုပို့ စ် တွင် ရေးသားခဲ့သော အကြောင်းအရာများ ၊ တင်ထားသော ကိုဌေးလင်း ၏ ဓါတ်ပုံ အတွက် ကိုဌေးလင်း ထံ မှ ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး ဖြစ်ပါသည် ။ သူ ၏ ခွင့်ပြုချက် အရ တင်ဆက်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
ဒီနေ့ အတွက်တော့..ဒီပို့ စ်က ကျနော့အတွက်..ကျက်သရေအရှိဆုံးပဲဗျာ..
နောက်လဲ ဒီလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ ထင်တာဗျူးလေးတွေမျှော်နေပါဦးမယ်..
အလှူရှိရင် ကျနော့်ကိုလဲ ဖိတ်နိုင်ပါတယ်နော်..
ထင်တာကို ဗျူးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး
သေချာ ကျကျနန ဗျူးထားတာပါ
ဒီအကြောင်းအရာ ၊ ဒီပို့ စ် ကို
ဂျာနယ် မှာ ထည့်ဖို့ ပို့ ထားပါတယ်
ဘယ်ဂျာနယ်တိုက်က ထည့်မလဲ ဆိုတာ တော့
စိတ်ချပါ အလှူရှိရင် ဖိတ်လိုက်ပါမယ်
ကျနော့်မာတီမှာ ပြန်ရှဲချင်လို့ ..ဖြစ်မလားဗျ
ကိုပေနဲ့ ..ကိုချစ်စိန်တို့အပတ်မလည်ပဲ ဖြစ်နေမှာဆိုးလို့ .ဗျ.. :D
နို့ မို့ ဆို ကူးပလိုက်ပြီ
ခုတောင်..Publish လုပ်ဖို့လယ်ဒီဘဲ..အဟီး..
ပစ်တင်ပလိုက်ရမရားပြော..ပါ ..ပြောပါ.. :D
ဒီလို ကောင်းမှု သတင်း ကို
ဖြန့် ပေးဖို့ တာဝန် က
စာရေးသူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ် မလား
Dear Ko Wind Talker,
I was touched after reading your writing. If you just mentioned the name of Ko Htay Lin @ Ko Chit Sein, it wouldn’t be very inspiring. Your introduction, however, drew the attention of me so
comprehensively that I could get the smell of နတ်သုဒ္ဓါ.
I’ve noted down that address in case I want to ask for his help. And then I’ll invite you so long as you live in Mandalay.
သာဓုဗျာ သာဓု၊ အရမ်း အရသာရှိတဲ့ အင်တာဗျူးပို့စ်လေးပါပဲ။ စေတနာသည်ကံဖြစ်လို့ ကျောက်ကောင်းကျောက်မြတ်များ အရောင်းအဝယ် များများဖြစ်ပြီး အလှူအတန်း ယခုထက်ပိုပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အလှူဒါနဆိုတာ ဘယ်လို ပြုနိုင်တယ် ဆိုတာကို ပြလိုက်သလိုပဲ။
ကြားဖူးတဲ့ တရားတစ်ပုဒ်မှာ အဲဒီလို သူများအလှူမှာ စိတ်ပါလက်ပါ ချက်ပြုတ်လုပ်ကိုင်ပေးလေ့ရှိတဲ့လူနဲ့ ငွေကုန်ခံပြီး လှူပေမယ့် စိတ်သောကတွေများ စိတ်မပြတ်တဲ့ အလှူ့ရှင်၊ သူတို့ နှစ်ဦး သေတော့ ချက်ပေးတဲ့ အိုးသူကြီးက ပိုတန်ခိုးကြီးတဲ့ နတ်သားဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ ကုသိုလ်ပြုရာမှာ
“ကိုယ်တိုင်၊ တိုက်တွန်း၊ ချီးမွှမ်း၊ စိတ်တူ ကုသိုလ်ယူ” တဲ့။
ဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့လူဟာ အလှူ့ရှင်နဲ့ထပ်တူထပ်မျှ ကုသိုလ်ရပါတယ်။
သာဓု..သာဓု..သာဓု လုပ်အားအလှူရှင်ရော post တင်ပေးတဲ့သူရော စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ဒီထက်ပိုပြီး လှူနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်…
Good say good!!!
သိပ်ကောင်းတဲ့ လုပ်အားဒါနပဲ … အားကျလိုက်တာနော် …
သန်လျှင်မှာရှိတယ်လေ ဆန်တတင်းချက်ရင် ဘယ်လောက် ဆိုပြီး အခကျေးငွေနဲ့လိုက်ချက်တာ ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိင်လို့ သူတို့ကိုအပ်ပါတယ် ကုသိုလ် မရတဲ့ အပြင် ငရဲမကြီး အောင်နေရတယ် .. ချက်ဖို့ ပေးသမျှ ဆန် ၊ ဆီ ၊ ဆား အိမ်ကို ခိုးသယ်ကြလို့ … ဒီလိုမျိုး လုပ်အား ကုသိုလ် အတွက် သာဓု ခေါ်ပါတယ် .. တနေ့ နေ့တော့ သူနဲ့အတူ ကုသိုလ် ယူချင်ပါသေးတယ်….
တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က လူတန်းစားမခွဲခြားပဲ လိုက်ကူညီတယ် ကြားရတာ ၀မ်းသာပါတယ် … ။
အလှူသာလုပ်ချင်ပြီး မချက်တတ်တဲ့လူတွေ ၊ ချက်ရမှာ ကရိကထများတယ်ထင်တဲ့ လူတွေ ၊ ပင်ပန်းမှာ စိုးတဲ့ လူတွေအတွက်တော့ … သတင်းထူးလေးပေါ့ … ။
မတူတဲ့ဘက်က စဉ်းစားကြည့်လျှင် .. လူဆိုတဲ့ အမျိုးက အတော် သံသယများတာပဲဗျို့ … ။
ကိုယ်က စေတနာနဲ့ လုပ်ကိုင်ပေးလျှင်တောင် … သူတို့ဘက်က(အလှူရှင်) သွေးသားမတော်စပ်လို့ .. ဈေးဝယ်တဲ့အခါ စာရင်းပိုတင်သလား …. မတန်တဆ၀ယ်လာသလား .. အလေလွင့်ဖြစ်သွားသလို့လို့ သံသယ၀င်ကောင်းဝင်နိုင်ပါတယ် … ထို့အတူ အခမဲ့လို့လည်း ကြော်ငြာထားတော့ .. ဒီလူ ဘာအကြံနဲ့ပါလိမ့်လို့ ..တွေးကောင်းတွေးနိုင်တယ် .. (အဆိုးဘက်ကပြောတာပါ .. ) ။
အခမဲ့ဆိုတာမျိုးရေးထားပေမဲ့ … သိတတ်တဲ့လူတွေကတော့ … ဆုငွေလိုမျိုး ၊ လက်ဆောင်လိုမျိုးပေးကြမှာပါ … တချို့ အကျင့်ပုတ်တွေကတော့ …. ခိုင်းသာခိုင်းတယ် ဖရီးကြောနဲ့ ခိုင်းချင်ကြတယ် … ။ စေတနာနဲ့ ကူညီတဲ့ လူကိုတောင် … စေတနာ ပြန်မထားတတ်တဲ့ လူတွေလည်း ရှိတယ် …. ။ လူအမျိုးမျိုး ..စိတ်အထွေထွေပါဘူး … အဲ့ဒါလေးတွေ ကြုံခဲ့ဖူးလို့ …
ကျွန်မအဒေါ်ကတော့ အလှူဆို ပန်းကန်ကူဆေးပေးတယ်
အဒေါ်ကပြောတာက အနိမ့်ဆုံးအလုပ်ကို လုပ်ပါတဲ့
ကျွန်မလည်း အဒေါ့်ကောင်းမှုနဲ့ သင်္ကြန်တုန်းက ရိပ်သာမှာဆွမ်းစားပြီး ပန်းကန်ဝင်ဆေးဖြစ်တယ်
ကျေဇူးပါကိုတော်ကာ…လုပ်အားဒါနအလှူ အင်မတန်မွန်မြတ်လှပါတယ်၊စေတနာနဲ့ သဒ္ဒါတရားအလွန်ပင် အဖိုးတန်မွန်မြတ်လှပါတယ်…နေရပ်လိပ်စာအား ကူးယူထားလိုက်ပါတယ် ….
ကြားရသူ အပေါင်းပါ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။
လိပ်စာလေးကူးထားလိုက်ပါတယ်။ သာဓုပါ မောင်ပေရယ်။ ဒီလို သတင်းစကားတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့ မောင်ပေတယောက် ဘုန်းကြီးလို့ သက်ရှည်ပါစေတော်………
ကိုဌေးလင်းရော မောင်ပေကိုပါ သာဓုခေါ်ပါတယ်။
သူ့ကိုဆုချတဲ့ ငွေကိုတောင် အလှူမှာ ပြန်လှူခဲ့တယ်ဆိုကတည်းက သူ့စေတနာ သိသာပါတယ်။
သိသိမသိသိ ကိုယ့်အလုပ်ပစ်ပြီးကူညီနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ဟာ တော်ရုံလူမထားနိုင်ပါဘူး။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓုပါ windtalker ရေ
လောကကြီးမှာ မတရားသဖြင့် စီးပွားရှာပီး လူအထင်ကြီးအောင် သတင်းစာထဲထည့်ကြော်ငြာတဲ့အလှူထက် ကိုဌေးလင်း (ခ) ကိုချစ်စိန် ရဲ့ လုပ်အားအလှူက နှိုင်းယှဉ်လို့ မရလောက်အောင် မြင့်မြတ်ပါတယ်ဗျာ…
အင်တာဗျူးပီး ထည့်ပေးတဲ့ မောင်ပေ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်……..